Florentino Perez oo ku dhawaaqay in Cayaartoy lama filaan ah uu Keeni doono Real Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Florentino Perez oo ku dhawaaqay in Cayaartoy lama filaan ah uu Keeni doono Real Madrid
(19-7-2018) Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid, Florentino Perez ayaa ku dhowaaqay inuu heshiisyo la geli doono ciyaartooyo lama filaan ku noqon doona taageereyaasha, kuwaas oo beddeli doona booskii uu banneeyey Cristiano Ronaldo oo u wareegay Juventus.
Real Madrid oo lala xidhiidhinayo dhawr ciyaartoy oo ay ugu horreeyaan labada laacib ee Eden Hazard iyo Kylian Mbappe ayaa waxay xili ciyaareedkan gelaysaa marxalad cusub iyo iyadoo dhaliyihii ugu weynaa uu ka maqan yahay, isla markaana uu tababare cusub hoggaaminayo markii uu shaqada ka beddelay Zinedine Zidane oo si lama filaan ah isku casilay.
Madaxweyne Perez oo ka hadlay magaalada Madrid, ayaa waxa uu ku wargeliyey taageereyaasha inay fishaan ciyaartooyo waaweyn.
“Waanu ka war haynaa waxa lafa filayo kooxdan xili ciyaareed kasta. Sababtoo ah, waxa aanu nahay Real Madrid, markastana waxa aanu rabnaa wax kasii badan intii hore. Waa koox guuleed oo haysata ciyaaryahanno cajiib ah.” Sidaas ayuu yidhi madaxweyne Perez.
Intaas kaddib ayaa waxa uu madaxweyne Perez soo bandhigay ballan-qaad ka farxiyey jamaahiirta, waxaanu yidhi: “Waxa aanu haysanaa ciyaartooyo wanaagsan oo aanu ku xoojin doono kuwo cusub oo lama filaan noqon doona.”
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa la hadal hayaa in dhawr ciyaartoy ay qaarkood iman doonaan, kuwaas oo kala ah Neymar, Mbappe, Hazard ama Lewandowski.